FAMBOLEN-KAZO DIRMRS TOLIARA – Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques
FAMBOLEN-KAZO DIRMRS TOLIARA
15/02/2021 15/02/2021 SMLN
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny Zoma faha 22 Janoary 2021 lasa teo ny fambolenkazo teto Atsimo-Andrefana, ka natao tao amin’ny Station forestière Sakaraha. Zanakazo maro karazana miisa 250 000 no novolena tamin’ny velarantany 100Ha eo. Nozaraina isaky ny Sampandraharaha miankina sy tsy miankina amin’ny Fanjakana izany, ka anjaran’ny sampandraharaha tsirairay ny manaramaso ny parcelle sy mikolokolo ny famboleny.
Nandray anjara feno nandritra izany ny DIRMRS Toliara, ary tapitra voavoly ny andron’io 22 Janoary io ihany ny 2ha izay anjarany. Tsy tapitra eo anefa ny asa fa tsy maintsy atao izay hahavelona ny hazo voavoly rehetra. Noho izany, tsy maintsy hiverenana afaka fotoana fohy mba hafahana manolo raha sanatria misy ny zanakazo maty.
Marihana ihany koa, fa 320 000ha no tanjona tratrarina mandritra ny fotoan’ny rotsak’orana. Maneho ny fahavononany hatrany ny DIRMRS Toliara hamita ny adidiny mba ho anjara biriky amin’ny famerenana indray ny Tanindrazantsika ho Nosy maitso.
Fampitam-baovao: DIRMRS Toliara
← FAMBOLEN-KAZO DIRMRS FIANARANTSOA
FITSIDIHANA FANARAHA-MASO NY ASA FANANGANANA NY TRANOBE IOMBONANA HANODINANA VATOSOA TAO VATOFOTSY ANTSIRABE →